Nehemia 9 - Ny Baiboly
Nehemia toko 9
Fifadian-kanina - Fieken-keloky ny vahoaka.
1Tamin'ny andro fahefatra amby roapolon'izany volana izany, nivory hifady hanina ny zanak'Israely, samy nitafy lasaka sy nanisy vovoka ny lohany. 2Nisaraka tamin'ny zanaky ny hafa firenena rehetra ny taranak'Israely, dia nitsangana sy niaiky ny fahotany sy ny heloky ny razany. 3Nony nitsangana samy teo amin'izay nitoerany avy izy rehetra dia namaky teny ampahefatr'andro, teo amin'ny bokin'ny lalàn'ny Tompo, ary ampahaefatr'andro niaiky heloka sy nivavaka tamin'ny Tompo Andriamaniny.
4Niakatra teo amin'ny lampihazon'ny levita Josoe, Banì, Kedmiela, Sabaniasa, Bonì, Sarebiasa, Banì, sy Kananì, ka nitaraina tamin'ny feo avo tamin'ny Tompo Andriamaniny. 5Ary hoy ny levita Josoe, Kedmiela, Banì, Hasebniasa, Sarebiasa, Odaiasa, Sebniasa, Fatatiasa: Mitsangana hianareo ka misaora an'ny Tompo Andriamanitrareo, mandrakizay, mandrakizay!
Isaorana anie ny anaranao be voninahitra, izay mihoatra noho ny fisaorana amam-piderana rehetra! 6Fa hianao irery, dia hianao ry Iaveh, no nanao ny lanitra, ny lanitry ny lanitra, mbamin'ny tafika rehetra eo aminy, ny tany mbamin'izay rehetra eo aminy. Hianao no manome aina an'izany rehetra izany; ary mitsaoka anao ny tafiky ny lanitra. 7Hianao, ry Iaveh Andriamanitra, no nifidy an'i Abrahama, ka nitondra azy nivoaka avy any Ora, any Kaldea, sy nanome anarana azy hoe Abrahama. 8Nahita ny fony ho mahatoky eo anatrehanao hianao, ka nanao fanekena taminy, fa hanome ho an'ny taranany, ny tanin'ny Kananeana, ny Heteana, ny Amoreana, ny Ferezeana, ny Jeboseana, ary ny Gergeseana, ary notanterahinao ny teninao, fa marina hianao.
9Nitsinjo ny fahorian'ny razanay tany Ejipta hianao, ary nihaino ny fitarainany teo amoron'ny ranomasina Mena. 10Nanao famantarana amam-pahagagana namely an'i Faraona hianao sy namely ny mpanompony mbamin'ny vahoakan'ny taniny rehetra, satria hitanao fa tamim-pianjonanjonana no nitondrany ny razanay, ka dia nahazo laza ny anaranao, araka izay hita mandraka androany. 11Nosarahinao teo anoloan'ireny ny ranomasina, ka dia namaky teo afovoan'ny ranomasina nandia tany maina izy; fa ireo mpanenjika azy kosa nazeranao tao amin'ny hantsana, sahala amin'ny vato, ao anatin'ny ranobe. 12Andry rahona no nitarihanao azy raha antoandro, ary andry afo nony alina, mba hanazava eo anatrehany ny làlan-kalehany. 13Nidina tany an-tendrombohitra Sinaia hianao, ka niteny tamin'izy ireo, avy any ambonin'ny lanitra, ary nanome azy fitsipika mahitsy, làlam-pahamarinana, lalàna aman-didy lavorary. 14Nampahalalainao ny sabatanao masina izy, ary nomenao didy, fitsipika aman-dalàna hotandremany izy, tamin'ny alalan'i Moizy mpanomponao. 15Avy any amin'ny lanitra no nanomezanao azy ny mofo hanafa-kanoanana azy; ary avy amim-batolampy no namoahanao ny rano hanala hetaheta azy. Dia nilazanao izy hiditra handray ny tany efa nianiananao homena azy.
16Kanjo ny razanay, latsaka am-piavonavonana izy ireo ka nanamafy ny hatony ka tsy nihaino ny didinao. 17Nandà tsy hihaino izy, ary tsy nahatsiaro ny fahagagana nataonao ho fanasoavana azy. Nanamafy ny hatony ary nentin'ny didohany dia nanendry mpitarika ho azy izy, mba hiverenany amin'ny fahandevozany. Saingy dia Andriamanitra vonon-kamela heloka hianao, miantra sy mamindra fo, ary malain-kitezitra, sy tsara fo indrindra, ka tsy nafoinao izy. 18Na dia tamin'izy nanao zanak'omby anidina aza, sy nilaza hoe: Ity no andriamanitrao, izay nitondra anao nivoaka avy tany Ejipta ka rafitra nanevateva anao izaitsizy, 19noho ny haben'ny famindram-ponao, dia tsy nafoinao tany an'efitra izy, ka tsy niala teo akaikiny ny andry rahona fa nitari-dàlana azy raha antoandro, na ny andry afo fa nanazava azy nony alina, amin'ny làlan-kalehany. 20Nomenao ny fanahinao tsara izy hahatonga azy ho malina; tsy nolavinao tsy hohanin'ny vavany ny mananao, ary namonona rano hanala hetaheta azy hianao.
21Efapolo taona dia namononanao izay nivelomany tany an'efitra izy, ka tsy mba nanana ny tsy ampy fahizany, ny fitafiany tsy nihatonta, ary ny tongony tsy mba nivonto.
22Fanjakana amam-pirenena no natolotrao azy, ka nozarainao ho azy ireo ny faritanin'ireny, dia lasany avokoa ny tanin'i Sehona, ny tanin'ny mpanjakan'i Hesebona, ny tanin'i Oga mpanjakan'i Basana. 23Nohamaroinao ho toy ny kintana eny an-danitra ny zanany ary nentinao izy ho any amin'ny tany, izay efa nolazainao tamin'ny razany, fa hidirany handray azy ho fananany. 24Dia tonga ny zanany nandray ny tany ho fananany, ary naetrinao teo anoloany ny mponina ao amin'ny tany, dia ny Kananeana, sy natolotrao ho eo an-tànany mbamin'ny mpanjaka sy ny vahoakan'ny tany, hataony amin'izay itiavany azy. 25Afany ny tanàna mimanda, azony ny tany lonaka; ary nahazo trano feno zava-tsoa isan-karazany izy, lavaka famorian-drano efa voahady, voaloboka sy oliva mbamin'ny hazo fihinam-boa an-kabetsahana. Ary nihinana izy ka voky, dia nihamatavy ary nanaram-po tamin'ny zavatra mahafaly, noho ny hatsaram-ponao lehibe.
26Kanefa nikomy izy ireo sy niodina taminao, natsipiny any ivohony ny lalànao, novonoiny ireo mpaminaninao, vavalombelona nanohitra azy mba hamerina azy ho aminao, ka rafitra naniratsira anao izaitsizy izy. 27Tamin'izay dia nafoinao izy, ho eo an-tanan'ireo mpampahory izay nampahory azy. Tamin'ny andron'ny fahoriany anefa nitaraina taminao izy, dia nihaino azy hianao any an-danitra, ary nentin'ny famindram-ponao lehibe dia nanome mpamonjy izay nanafaka azy teo an-tanan'ireo mpampahory. 28Kanjo nony niadana hatreo izy, dia nanao ratsy eo anatrehanao indray, ka nafoinao ho eo an-tanan'ny fahavalony, sy tonga tapahin'ireny. Fa nitaraina taminao indray izy, ka nihaino azy hianao any an-danitra, sy nanafaka azy matetika noho ny famindram-ponao lehibe. 29Nitsangan-ko vavolombelona namely azy hianao mba hamerina azy amin'ny làlanao, izy kosa nikiry tamin'ny fiavonavonany, tsy nihaino ny didinao, nandika ny fitsipikao, nefa izany raha tandremana dia ahitana ny aina; soroka tsy mety hiantsoroka no narosony ary nanamafy ny hatony izy ka tsy nety nihaino. 30Dia mbola nandefitra taona maro ihany hianao; ny fanahinao, ny vavan'ny mpaminaninao no nentinao ho vavolombelona namely azy, fa tsy nihaino izy. Tamin'izay dia natolotrao ho eo an-tanan'ny vahoakan'ny tany izy. 31Noho ny haben'ny famindram-ponao anefa tsy naringanao izy, na nilaozanao, fa Andriamanitra miantra sy mamindra fo hianao.
32Koa ankehitriny, ry Andriamanitray ô, Andriamanitra lehibe sy mahery sady mahatahotra, hianao izay mitana ny fanekena sy ny famindram-po, dia aoka tsy ho zavatra kely eo imasonao ny fahoriana rehetra efa nanjò anay dia ny tenanay, ny mpanjakanay, ny lehibenay, ny mpisoronay, ny mpaminaninay, ny razanay, ary ny vahoakanao rehetra, hatramin'ny andron'ireo mpanjakan'i Asiria, ka mandrak'izao anio izao. 33Marina hianao tamin'izany rehetra nanjo anay izany, satria hianao nanaraka ny marina, izahay kosa nanao ratsy; 34ny mpanjakanay, ny lehibenay, ny mpisoronay ary ny razanay dia samy tsy nanaraka ny lalanao, ka tsy nasiany raharaha ny didinao sy ny teny niampanganao azy. 35Teo anatin'ny fanjakany, tao afovoan'ny soa be nataonao taminy, ary teo amin'ny tany malalaka sady lonaka natolotrao azy, tsy mba nanompo anao izy na niala tamin'ny ratsy fanaony. 36Koa indro, andevo izahay izao! Indreto izahay andevo eto amin'ny tany nomenao ny razanay indrindra, hihinanany ny vokatra sy hiaranany amin'ny soa avy aminy.
37Ny vokatra be avy aminy dia ho an'ny mpanjaka notendrenao hampanompo anay noho ny fahotanay. Ny tenanay mbamin'ny biby fiompinay koa ataony amin'izay itiavany azy, ka latsaka amin'ny fahoriana mafy izahay. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2320 seconds